PL oo qaylo-dhaan ka dirtey Tahriibta 28 Jul 28, 2012 - 4:32:53 AM
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa baaq u direy Beesha caalamka oo ku saabsan wax ka-qabashada dhalinyarada Soomaliyeed ee tahriibta ku leeda sanad weliba.
Dr.Farole oo wareysi siiyey Idaacada BBC-da ayaa ku dheeraadey dhibaatooyinka Tahriibta iyo khatarta ay ku jiraan dhalinyarada Soomaliyeed oo dalkooda ka baxaya islamarkaasina dibedda u raadsanaya nolol wanaagsan sida loogu sheekeeyey.
Waxa uu ka waramay Madaxweynaha Puntland dooni ay saarnaayeen 87 ruux oo Somali ah taasi oo ku dhex kharaabtey badda u dhaxeysa Libya iyo Talyaaniga kadibna la soo war geliyey xili danbe oo xiriir dhankooda la sameyeen ciidamada Badda labada dal suurogashey dhamaadki in Banqazi lagu soo celiyo tahriibayaashii.
Dr.Cabdiraxman Farole mar wax laga weydiiyey sababta dhalinyarada Somaliyeed xiligan tahriibineysa ayuu sheegey in hataan dalka xaaladiisu guud ahaan degantahay islamarkaasina qofka ku fekera tahriib uu yahay qof aan go’aan qaadan karin ama da’diisu yartahay oo laga dhaadhacsiiyey in dibadu nolo wacantahay.
Waxa uu direy fariin iyo qaylo dhaan ku saabsan in caalamka indhaha ku hayo khatarta murugsan ee wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
‘Lama xisaabi karo dadka ku dhintey inta u dhaxeysa Sudan iyo Libya ,waxaa sameysmey kooxo isku xiran oo maafiyo oo ka shaqeeya Somalia ,Ethiopia ,Sudan iyo Libya ,waxaan ka soo jeedinayaa Qaylo-dhaan (Waa warey) ,Aduunkoo dhan inuu arintaas wax ka qabto ,madaxda Soomaliyeed iyo hayadaha caalamiga ah sida IOM,UNHCR iyo ICRC’’. Ayuu yiri Dr.Cabdiraxman Maxamed Farole.
Tan iyo markii ay meesha ka baxdey dowladdi dhexe Somalia 1991 kumanaan Somali ah ayaa dalka dibadiisa u baxdey waxana kala kulmeen dhibaatooyin badan oo ugu horeyso badda gaar ahaan dalalka Yemen iyo Libya.
Faahfaahinta Qarax ka dhacay Bossaso'' Dhageyso
Somali loo diiday damaanad Kenya
Cabdiweli Gaas oo tagay Garowe
EDITORS PICK: Somalia: Puntland Government Condemns Deadly Terrorist Attack in Bossaso
GAROWE, Somalia 05 Dec, 2013( Press Release) Somalia: Puntland Government Condemns Deadly Terrorist Attack in Bossaso
Somalia: Puntland VP returns to Taleh, Govt cancels unauthorized conference
Somalia: Federal Govt and AMISOM forces clash with Al Shabaab near Beledweyne
Somalia: Interim Central Bank Governor approved in Cabinet meet